Chin'ono naVaNgarivhume Vorara Zvakare Mutirongo
VaHopewell Chin'ono nemutungamiri weTransform Zimbabwe Vaacob Ngarivhume nemagweta avo
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume, vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga, panguva iyo mutori wenhau, Hopewell Chin’ono anzi nedare adzokere mudare neChishanu.
Vachitura mutongo pachikumbiro chaVaNgarivhume chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mutongi wedare, VaTranos Utahwashe, vati VaNgarivhume havakodzere kubuditswa muhusungwa.
VaUtahwashe vati VaNgarivhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muhusungwa vachiti vanoisa hupenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere cheCovid19 chiri kuuraya vanhu munyika.
VaUtahwashe vati mashoko anonzi akataurwa naVaNgarivhume padandemutande ravo reTwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo vachiti raramo munyika yangofanana nehupenyu nerufu mashoko anokuridzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muhusungwa sezvo vachiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana VaNgarivhume vakapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Zvaturwa nedare zvatsinhirwa negweta raVaNgarivhume, VaMoses Nkomo, avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Zvichakadai, kunzwikwa kwechikumbiro chaChin’ono chekuti atongwe achibva kumba pamhosva imwecheteyo chaenderera mberi nekunzikwa mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
Izvi zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu naAmai Beatrice Mtetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo.
Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi, VaNgoni Nduna, vati nguva dzanga dzisisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yeCovid19 Regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika.
Amai Mtetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko.
Izvi zvatsinhirwa nerimwe gweta riri kushanda naAmai Mtetwa panyaya iyi, VaGift Mtisi.
Zvichakadai, meya weHarare, VaHerbert Gomba, vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupihwa kwemasitendi.
Gweta ravo, VaLovemore Madhuku, vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yaVaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Padare panga pazere nhengo dzeMDC Alliance dzanga dzichisanganisira munyori mukuru mubato iri, VaChartlon Hwende.